आस्था राउतदेखि दीपाश्री निरौलासम्म, जो आफ्नै बोलीका कारण विवादमा तानिए | Ratopati
personकुवेर गिरी exploreकाठमाडौं access_timeअसार २७, २०७७ chat_bubble_outline0
काठमाडौं । नेपाली कलाक्षेत्र हरहसमेसा चर्चामा रहने गर्दछ । कहिले अभिनेत्रीका ग्ल्यामर, उनीहरुको प्रेम सम्बन्ध चर्चाको विषय बन्ने गर्दछ भने कहिले फिल्म व्यवसाय हुने गरेको छ ।
कतिपय अवस्थामा कलाकारले एकअर्काप्रति गर्ने व्यवहार, आरोपप्रत्यारोप र उनीहरुले विचार नगरी बोलेको विषय समेत विवाद र चर्चाको विषय भएका छन् ।
दीपाश्री निरौलाले हालै एक टेलिभिजन कार्यक्रममा राजेश हमाल महानायक हो र ? भनेर प्रश्न उठाएकी थिइन् । कोरोनाको कारण फिल्म क्षेत्र विषम परिस्थितीमा रहेको समय अभिभावकत्व निर्वाह गरेर आफूलाई वर्षाैँदेखि सहयोग गरेका प्राविधिकलाई परेको पीर मर्कामा ‘महानायक’ उपाधिधारी राजेश हमाल सहयोगी हुन नसकेको भन्दै दीपाले प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
‘महानायक’को हिसावले फिल्म क्षेत्रको पीडामा मह्लम लगाउन नसके उक्त पद प्रति शंका उठ्ने उनको आशय थियो ।
करिव ४ वर्ष अगाडि अभिनेत्री प्रियंका कार्कीलाई अमेरिकामा एक युट्युव टेलिभिजनले अहिले अमेरिका यात्रा कतिऔँ पटक हो ? भनेर प्रश्न गरेको थियो । सोही क्रममा उनले हतार हतारमा युके, युएस धेरै पटक गइसकेँ तर अमेरिका भने पहिलो पटक भनेर निर्धक्क जवाफ दिएकी थिइन् ।
आमिरभन्दा पहिले रवि किसन बने गुरु ओशो रजनिश